‘मुखौटा’को गीत, लाँउछ त दर्शकसँग प्रित ? (भिडियो सहित) « Mazzako Online
‘मुखौटा’को गीत, लाँउछ त दर्शकसँग प्रित ? (भिडियो सहित)
चलचित्र ‘मुखौटा’को ओरजिनल साउण्ड ट्रयाक (ओयसटी) रिलिज गरिएको छ । रिलिज गरिएको गीतमा चलचित्रका निर्माता रबिन श्रेष्ठ स्वयंको आवाज रहेको छ । भुपेन्द्र खड्काले लेखेको उक्त गीतमा कल्याण सिंहले संगीत दिएका छन् ।
गीतमा रबिनलाई दि सिङ्ग ब्याण्ड र यम बुद्धले साथ दिएका छन् । निर्माता रबिन चलचित्र क्षेत्रमा आउनु अघि गायन नै थिए । साथीहरुको सल्लाह अनुसार गीतमा आफ्नै आवाज सुहाउने भएकाले आफुले गीत गाएको रबिन बताउछन् ।
जेष्ठ १६ गते रिलिज हुने चलचित्र ‘मुखौटा’को प्रोमो रिलिजसँगै निकै हाईप क्रिएट भएको छ । ‘मुखौटा’ मा राजेश हमाल, सुनिल थापा, रविन तामाङ, सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, निशा अधिकारी, हर्षिका श्रेष्ठ, प्रशान्त ताम्रकार लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
चलचित्रको निर्देशन अर्पण थापाले गरेका हुन् । चलचित्रमा माफियाहरुको कथा देखाउन खोजिएको छ ।